Kannum Kannum Kollaiyadithaal(2020) | MM Movie Store
App Developerနဲ့ Animator တို့ သူငယျခငျြး ၂ယောကျ ရှိတယျ။နညျးပညာသမား သူငယျခငျြး၂ယောကျပေါ့။အမွဲလိုလို သောကျလိုကျစားလိုကျ၊ ပါတီသှားလိုကျ၊
မိနျးမပှေးလိုကျနဲ့ သူတို့ဘဝက လောကနိဗ်ဗနျပဲ….မကွာခငျမှာပဲ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ ဘဝကိုတညျငွိမျသှားစမေဲ့ခဈြသူလေးကိုယျစီတှဖေို့အကွောငျးဖနျလာခဲ့တယျ….
တကယျတော့ ဒီနညျးပညာသမား(၂)ယောကျဟာ သူတို့တတျစှမျးတဲ့ပညာကိုအသုံးခပြွီး ခိုးမှုမြားစှာကြူးလှနျထားတဲ့သူတှဖွေဈကွပါတယျ…ဘဝကိုတညျတညျငွိမျငွိမျလေးနဖေို့ကွိုးစားခါမှ သူတို့ ကြူးလှနျထားတဲ့ ရာဇဝတျမှုအတှကျရဲခြုပျကွီးဟာ မီးခိုးကွှကျလြှောကျ လိုကျလံစုံစမျးပါတော့တယျ…
ရဲခြုပျကိုယျတိုငျ အငျတိုကျအားတိုကျလိုကျလံဖမျးဆီးရအောငျ သူတို့ ဘယျလောကျဆိုးတဲ့အမှုတှကြေူးလှနျခဲ့လဲ…ဒီအမှုတှကွေောငျ့ နောကျဆကျတှအကြိုးဆကျတှဘေယျလိုဖွဈမလဲ…သူတို့(၂)ယောကျကရော ဖွတျကြျောနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….
App Developerနဲ့ Animator တို့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက် ရှိတယ်။နည်းပညာသမား သူငယ်ချင်း၂ယောက်ပေါ့။အမြဲလိုလို သောက်လိုက်စားလိုက်၊ ပါတီသွားလိုက်၊
မိန်းမပွေးလိုက်နဲ့ သူတို့ဘဝက လောကနိဗ္ဗန်ပဲ….မကြာခင်မှာပဲ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝကိုတည်ငြိမ်သွားစေမဲ့ချစ်သူလေးကိုယ်စီတွေ့ဖို့အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်….
တကယ်တော့ ဒီနည်းပညာသမား(၂)ယောက်ဟာ သူတို့တတ်စွမ်းတဲ့ပညာကိုအသုံးချပြီး ခိုးမှုများစွာကျူးလွန်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်…ဘဝကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေဖို့ကြိုးစားခါမှ သူတို့ ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုအတွက်ရဲချုပ်ကြီးဟာ မီးခိုးကြွက်လျှောက် လိုက်လံစုံစမ်းပါတော့တယ်…
ရဲချုပ်ကိုယ်တိုင် အင်တိုက်အားတိုက်လိုက်လံဖမ်းဆီးရအောင် သူတို့ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့အမှုတွေကျူးလွန်ခဲ့လဲ…ဒီအမှုတွေကြောင့် နောက်ဆက်တွအကျိုးဆက်တွေဘယ်လိုဖြစ်မလဲ…သူတို့(၂)ယောက်ကရော ဖြတ်ကျော်နိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့….